सरकारले दुइतिहाइ दम्भमा लुटतन्त्र मच्चाएको छः नेता पौडेल • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
पोखरा, २४ भदौ/ नेपाली काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दुई तिहाईको भरमा सरकारले अदालत र अख्तियारलाई तर्साएर देशमा लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रमको पोखरामा मंगलबार उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले अदालतले गरेका फैसलाहरु बाँझिनु भनेको दुइतिहाईकै हस्तक्षेप भएको बताए ।
उनले भने, दुइतिहाई देखाएर अदालतलाई तर्साउने, दुइतिहाइ देखाएर अख्तियारलाई तर्साउने काम भएको । एनसेल’bout अदालतले गरेको निर्णयमा सरकार किन बोल्दैन ? उनले प्रश्न गरे, सरकार किन ठूला माछा समाउन सक्दैन ? एनसेल र वाईडबडीमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार परेको छ । साना माछा समाउँछन् । ठूला शासकलाई कारबाही गर्न सक्दैन ।
सरकारको काम कारबाहीबाट जनता असन्तुष्टि छन् । यसैले पनि सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, सत्तामा पुग्ने बेला सपना बाँडे, तर सपना अनुसारको काम नगरेको हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ ।
उनले वीपीले देखाएको बाटो अंगिकार गरेमात्र काँग्रेसका सपना पूरा हुने बताए । उनले वीपीभन्दा ठूलो समाजवादी हुँ भन्ने कम्युनिष्ट देशको शासन गरे पनि उनीहरुले पक्षपातको शासन गरिरहेको बताए । उनले भने, आफ्नै कार्यकर्तालाई पोस्न मनी र मसलको प्रयोग गररहेकेका छन् ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न काँग्रेसलाई निर्देशन दिए । उनले काँग्रेस हुँ भन्नेले रुखमा भोट दिए जित सुनिश्चित हुने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य वृन्दादेवी रानाले जागरण अभियानबाट काँग्रेस एक ढिक्का भएको सन्देश जाने बताइन् ।
काँग्रेस कास्कीले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि जागरण अभियान सुरु गरेको जनाएको छ । यो सँगै बुधबार देखि वडा इकाइसम्म जागरण अभियान जारी रहने जिल्ला सदस्य नवीन सिग्देलले जानकारी दिए ।
पोखराको चरक अस्पतालमा कपाल प्रत्यारोपण सेवा सुरु २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
पोखरा महोत्सवमा कोरियन प्रविधीको प्यानल हाउसको ’boutमा जानकारी लिनेको भीड २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट नारायणकाजी र भगवती विजयी २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
सांसद दीपक मनाङ्गे पोखराको लेकसाइडबाट पक्राउ २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
कारको ट्रायल दिदा ३०० को सट्टा अब २४ रुपैयाँ मात्र, नयाँ गाडीको प्रयोग हुने २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
दीपक मनाङ्गे विरुद्ध कास्की प्रहरीमा एन्फा कास्की अध्यक्षको जाहेरी २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
अष्टे«लिया र पोखराका फोटो पत्रकारबीच अनुभव आदानप्रदान २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
ठग्नेलाई झापड नहानेर माला लगाई दिउ त ?- दीपक मनाङ्गे २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
पोखराका मापदण्ड विपरीतका भवनलाई वैधानिकता दिन विधेयक (यस्तो छ विधेयक) २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३
कानूनी उपचारका लागि उजुरी दिन्छु–एन्फा कास्की अध्यक्ष गुरुङ २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:३३